Kizhi. Okubonwayo nezikhumbuzo
I-Republic of Karelia idume ngobuhle nje kuphela oluvelele yemvelo, kodwa futhi eziningi izindawo ukuthi kufanele avakashele ngamunye. Amancane ukwanda kwabantu, elibuhlungu izimo zemvelo kanye udalennosst kusukela emadolobheni amakhulu jikela sihamba ngesivinini umbhapathizo ekhona isiko, impilo kanye namasiko bendawo.
Kizhi Island, elise Lake Onega, is kude ngaphandle kwezwe eyaziwa ngenxa igceke lesonto ezweni Kizhi. Lokhu Ensemble bokwakha lokhuni uhlukile futhi unrepeatable, futhi eziningi zezihambeli ziyafika ukubona ngamehlo ami siqu.
Kizhi Pogost - reserve, beqaphela ukuthi into kumagugu esizwe yeRussia. Ngaphezu kwalokho, uyinto izwe amagugu engokwesiko UNESCO. The Ensemble kusho lukhulu zomlando isitshela indaba yokuphila esiqhingini esikhathini esidlule.
Kizhi Museum siqukethe izakhiwo eziningana, usuku ukwakhiwa zazo - 18-19 leminyaka. The Ensemble kufaka umbhoshongo isikhencezo amasonto amabili. Bona ebiyelwe izithiyo ekhethekile sokhuni ulingisa nezivikelo bendabuko, elamiswa ngaleso sikhathi.
Ngo-1966, wayiswa lapha inani elikhulu izakhiwo bendabuko nezinye nemizana, bese ensimini ka Museum "Kizhi" yasungulwa. Izikhangibavakashi, izakhiwo kanye nezinhlaka ezikuwo zibonakalisa izakhiwo esiyingqayizivele yendabuko esifundeni. Ikhono ababazi sozdavavschih izakhiwo Ensemble, kwaba ephakeme ngokungajwayelekile, kodwa manje, ngeshwa, it is cishe elahlekile.
Igceke lesonto Kizhi, ezikhangayo aziwa umhlaba wonke, futhi idume iSonto eyingqayizivele isimo. Lesi sakhiwo kubhekwa omunye esivelele kunazo zonke Ensemble. Yakhiwa ku ubuchwepheshe ubudala, ngaphandle kokusebenzisa izinzipho, kuphela ngembazo. Empeleni lokhu akulona iqiniso, zikhona izinzipho ekwakhiweni, kodwa zisetshenziselwa kuphela ukwakhiwa domes.
I emlandweni wesonto iqala ngo-1714. Ngemva ngalo lamiswao futhi ngenxa umlilo kusukela umbani. Ukuphakama izakhiwo ingaphezu 30 metres, esiqongweni siqukethe izahluko 22. Isonto egumbini akuyona evuthayo, futhi isetshenziselwa yokukhulekela phakathi nezinyanga zasehlobo kuphela.
Ibandla siqukethe eziyizitezi eziningana, ngayinye yaba lihlotshiswe amakhanda emasayizi nabobunjwa labehlukene. I-iconostasis ezine ongaphakathi, lapho kukhona ingqikithi imifanekiso 20 obuhlukahlukene degrees endulo.
Ayikho emangalisayo ngaphansi kanye nezinye izakhiwo ku Kizhi Pogost. Izikhangibavakashi kule ndawo is yabajabulela hhayi kuphela design esiyingqayizivele, kodwa futhi organically. Intercession Isonto Yakhiwa ezingaphezu kuka efudumele, futhi umkhulekele ngendlela kuwo esikhathini abandayo ebusika. It esakhiwe ngemuva kosuku isimo. Kule ndaba, umklamo kanye nomhleli aphelele ngokugcwele Ensemble main, ngaphandle ukuphambukisa nokunakwa isakhiwo main. Belfry, ngasinda kuze kube sesikhathini sethu, lakhiwa ngo-1862 esizeni eyodwa ubudala. Kodwa ocingweni lamapulangwe engafakwanga.
Summer ngokungangabazeki isiphi isikhathi esingcono kakhulu ukuhambela isiqhingi Kizhi, ogama ezikhangayo izohamba i uphawu ongenakucimeka wokulingwa ezisenkumbulweni wonke umuntu wavakashela lapha.
Kanjani ukuze uthole Ipaki Feofaniya (Kiev)? Umlando epaki ezikhangayo
Cathedral Uvuko Cathedral, Arzamas
Cambodia Ezokungcebeleka: incazelo kanye nokubuyekeza
Vietnam (Nha Trang) libuyekeza mayelana nokuzijabulisa enhle nokwelapha
Distribution - siyini lesi sibalo?
Ukuvuvukala ngaphansi kwamehlo - kubangela bawabulale.
Formula ibhayisikili - the liyabonakala kakhulu isigaba isabelomali imoto
RAM - inkumbulo computer op (RAM)
Nokuqoqwa kwezikweletu enkantolo nge izinhlangano ezingokomthetho kanye nabantu
Nursery Cavalier iNkosi uCharles Spaniel